Sida loo edit gareeyo jimicsiga Apple Watch | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo tafatiro jimicsiga Apple Watch
Sida loo tafatiro jimicsiga Apple Watch
Markaad dhammayso inaad la gasho Apple Watch, waxaad ku farxi kartaa dhammaan shaqadaada adag ee app-ka firfircoonida ee iPhone-kaaga. Tani waxay ku siinaysaa dhammaan noocyada jaantusyada waxtarka leh, khariidado iyo isbeddello si ay kuu tusiyaan sidaad wax u qabanayso.
Laakiin maxaa dhacaya haddii aad ku gashay tababarkaas shil? Ama haddii aad illowday inaad gasho jimicsiga? Ma wax ka beddeli kartid jimicsiga Apple Watch saacaddaada, ama abka Waxqabadka ee iPhone kaaga. Laakin nasiib wanaag, wali waxaa jirta daw lagu hagaajin karo rikoorka. Waa kan sida loo tafatiro jimicsiga Apple Watch.
Maxaa ku dhacaya xogta jimicsigaaga Apple Watch?
Haddii aad rabto inaad wax ka beddesho taariikhda jimicsigaaga, waxay kaa caawinaysaa inaad si sax ah u fahamto waxa ku dhacaya xogtaada markaad dhammayso jimicsiga.
Iyada oo ku xidhan nooca jimicsiga, Apple Watch kaaga waxay soo ururisaa xisaabaadyo kala duwan, sida garaaca wadnaha, xawaaraha iyo xawaaraha. Jimicsiga bannaanka sida orodka iyo baaskiil wadida, waxa ay sidoo kale diiwaan gelisaa jidkaaga. Apple waxay u kaydisaa xogtan si taxane ah "muunado." Muunad kastaa waa qiyaasta shay meel gaar ah oo waqti ah. Marka tusaale ahaan, khariidadda dariiqaadu dhab ahaantii waa muunado taxane ah oo isku-duwayaal ah oo qeexaya goobtaada wakhtiyo joogto ah.
Markaad dhammayso jimicsigaaga, muunadahan waa la isku dubariday waxaana lagu dhejiyaa iPhone kaaga si loogu kaydiyo HealthKit. IOS waxa ay ku kaydisaa xogtan sir ah meel gaar ah oo Sugan, kana fog indhuhu soo jeedinayaan. Sababta amnigan oo dhan waa in HealthKit ay kaydiso dhammaan xogtaada caafimaad ee xasaasiga ah, sidoo kale.
App-ka caafimaadka Apple waxaa loogu talagalay inuu kuu oggolaado inaad maamusho xogtaada HealthKit, marka tani waa meesha aad u baahan tahay inaad ka eegto haddii aad rabto inaad wax ka beddesho jimicsigaaga.
Sida loo tirtiro jimicsiga Apple Watch
Tirtiridda jimicsiga waa sahlan tahay. Furo Caafimaadka app oo u tag Summary shaashadda. (Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad taabato sumadda wadnaha ee shaashadda hoose laba jeer si aad halkaas ugu soo laabato.) Hoos u deg Shaqooyinka oo ku dhufo. Waxaa lagu soo bandhigi doonaa jaantusyo badan, laakiin iska dhaaf kuwaas oo dhan. Bedelkeeda, u rog dhanka hoose oo taabo Muuji Dhamaan Xogta.
Marka xigta waxaad arki doontaa liis dheer oo jimicsi kasta oo aad waligaa gashay. Astaanta saacada buluuga ah waxay tusinaysaa jimicsiga aad ku dhex gashay Apple tababarka app. Kaliya midig u mari jimicsiga si aad u muujiso delete Badhanka.
Markaad taabato delete badhanka, waxaa lagu waydiin doonaa inaad rabto inaad tirtirto xogta caafimaadka ee la xidhiidha. Tani waa sifada waxtarka leh haddii aad si lama filaan ah u gashay hawl maalmeedka qaarkood sida haddii ay tahay jimicsi. Tusaale ahaan, markaan u socdo dukaamada, Apple Watch-gayga mararka qaarkood wuxuu si toos ah u ogaadaa jimicsiga socodka. Adiga oo tirtiraya jimicsiga iyadoo la ilaalinayo xogta caafimaadka ee la xidhiidha, socodku wuxuu wali gacan ka geystaa faraantiyada Hawshayda, laakiin hadda looma soo bandhigin jimicsi ahaan.
Tirtiridda jimicsiga abka Caafimaadka waa sahlan tahay.
Sawirka: Graham Bower/Cult of Mac
Tafatirka jimicsiga waa suurtagal, laakiin ka sii dhib badan. Ku laabo abka Caafimaadka Muuji Dhamaan Xogta shaashadda oo hel jimicsiga aad rabto inaad wax ka beddesho. Taabo si aad u hesho Details aragti. Xagga sare ee shaashadda, waxaad arki doontaa Faahfaahinta Tusaalaha iyo Faahfaahinta qalabka. U gudub kuwan si aad u hesho Tusaalooyinka jimicsiga. Kuwaas waxaa ka mid Energy (kaloriinta) Heerka Wadnaha iyo (noocyada jimicsiga qaarkood) Talaabooyinka iyo masaafada.
Ku dhejinta mid ka mid ah noocyadan muunada ah waxay keenaysaa liis waqti-ku-shaabadaysan oo ah dhammaan muunadaha la qaaday intii lagu jiray jimicsiga. Waxaad halkan ka tirtiri kartaa muunad haddii aad rabto. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inuu jiro akhrin garaaca wadnaha qallafsan oo aad ogtahay inay cilad tahay oo ay kharribayso celceliska.
Nooca kaliya ee muunada ah ee abka caafimaadku aanu hadda kuu ogolayn inaad wax ka beddesho waa isku-duwayaasha goobtaada. Malaha sababta oo ah waxay ahaan lahayd si aad u fudud in la xidho khariidadda dariiqaaga haddii ay sidaas samayso.
Ma illowday inaad gasho jimicsi? Waxaad ku dari kartaa addoo isticmaalaya app Health
Sida jimicsiga loogu daro abka Waxqabadka
Inteena badan, tafatirka jimicsiga waxay u badan tahay inay ka dhib badan tahay inta ay mudan tahay. Way fududahay kaliya in la tirtiro jimicsiga caajiska ah oo lagu daro mid cusub bedelkeeda. Dhab ahaantii, gacanta ku darista jimicsiga ma fududayn karto. Gudaha App-ka Caafimaadka, aad Baadh > Dhaqdhaqaaq > Jimicsi oo ku dheji Ku dar Xogta (midig sare). Hadda waxaad dooran kartaa nooca jimicsiga, geli bilawga iyo dhammaadka wakhtiga, ku dar kalooriyooyinka, iyo noocyada jimicsiga qaarkood, fogaanta.
Tani waxay aad u faa'iido badan tahay haddii aad jimicsi ku sameyso mashiinka wadnaha ee qolka jimicsiga, laakiin illow inaad xirto Apple Watch. Waxaad si fudud u geli kartaa faahfaahinta si toos ah taleefanka markaad dhammayso.
Awood weyn ayaa ku timaada mas'uuliyad weyn
Kalooriyooyinka gacanta lagu geliyo habkan ayaa wax ku biiriya giraantaada Hawsha. Taas oo macnaheedu yahay in Apple ay kugu aamini karto kalsooni badan. Gaar ahaan haddii aad saaxiib kala qaybqaadanayso Loolanka Hawsha.
Laakiin ugu dambeyntii, haddii aad ka been sheegto dhaqdhaqaaqaaga jimicsiga, qofka kaliya ee aad runtii khiyaanayso waa naftaada.
22 Qalabka Bilaashka ah ee Suuqyada Facebook
3 Gacan Gelinta Google Xayeysiinta Qoraallada si Loogu Sameeyo Hawlaha otomaatiga ah